China 5XZC-L Murabhoritari Yekuchenesa Mbeu & Grader vagadziri nevatengesi | SYNMEC
5XZC-L Murabhoritari Yekuchenesa Mbeu & Grader
Zita Murabhoritari mbeu yekuchenesa negiredhi
Air blower simba 0.75 kw
Vibration simba 0.37 kw
Vibration frequency 0-400 nguva / min
Air blower mota yakatarwa 2800r/min,220V,50Hz
Vibration mota yakatarwa YS-7124,1400 r/min
Iyo 5XZC-L yekuchenesa mhodzi & giredhi ndeye chaiyo yekuchenesa yekuchenesa zvinhu uye giredhi. Inokodzera kupatsanurwa kwemhando dzese dzembeu sembeu dzezviyo, mhodzi dzehuswa, mhodzi dzemaruva, mhodzi dzemuriwo, mhodzi dzemuriwo nezvimwe.
Ndiyo dhizaini yemhepo ine kumberi uye kumashure kwemhepo yekuchenesa masisitimu. Mukuita kuchenesa mhepo, inobvisa guruva, kusvibiswa kwakareruka uye zviyo zvisina kuzadzwa. Hunde yekusefa yakashongedzerwa muzvikamu zvitatu zvemasefa ayo aimboparadzanisa tsvina huru, mhodzi huru, uye tsvina diki mhodzi. Mushure mekugadzirisa, mbeu dzakakodzera dzinoparadzaniswa.
Mbeu yekuchenesa muchina unonyanya kushandiswa kune ese marudzi embeu yekugadzirisa maitiro ebvunzo. Inoshandiswawo zvakanyanya kuchenesa mbeu dzemhando yepamusoro uye kurongedza saizi. Muchina uyu dhizaini yemhepo. Iyo neyekare uye yekumashure duct inoparadzanisa mapaipi emhepo, saka iwe unogona kuchenesa guruva, kusvibiswa kwakareruka uye zviyo zvakasvibiswa kubva kumbeu yakanaka. Hunde yesefa inodedera inogadzikwa 3 masefa akaturikidzana kumusoro, pakati uye pasi chikamu. Yekutanga sieve layer inoshandiswa kuparadzanisa kusachena kukuru & mhodzi huru. Yechipiri sieve layer inoshandiswa kupatsanura tsvina diki & mhodzi diki. Mhodzi dzakasara imbeu dzakakodzera uye dzinoenda kunzvimbo huru yekuburitsa. Nekugadzirisa bhatani re frequency pane vibration sieve trunk, unogona kudzora zvinhu zvinomhanya zvekumhanya pane sieve screen pamusoro. Saka iwe unogona kunyatso gadzirisa mhando yekuchenesa mbeu nekugadzirisa hunde vibration frequency. Mhepo ine huruva inogadzirwa mushure mekupepeta inozoburitswa mushure mekusefa. Uku ndiko kugadzirwa kwekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.
Murabhoritari mbeu yekuchenesa uye kuvaka giredhi:
1. Hopper yekudyisa
2. Electromagnetism vibration feeder 3. Hunde yekudengenyeka
7. Dhiraivha system
8. Maitiro ekuchenesa mhepo kaviri
Zvakapfuura: 5XZ-L Laboratory Gravity Separator
Zvinotevera: 5XWY indented silinda kureba giredhi zviyo zvekuparadzanisa muchina nekureba
Grain Cleaner uye Grader
5XWY indented humburumbira kureba grader zviyo sepa...
5XFX-L Murabhoritari Mbeu Mhepo Yekuchenesa
5XQS-L murabhoritari destoner yembeu dzemiriwo ...